“Pate feuilletée” amboarina Ireto avy ireo zavatra ilaina sy ny dingana atao ho an’ny fanamboarana « pate feuilletée » :
Akora ilaina (ho an’ny paty 1k200g) · Lafarinina 350g · Sira 1sk · Dibera malefaka 30g · Dibera 390g · Rano 20sl
1. Alefa ao anaty mixeur ny lafarinina, sira sy dibera malefaka. Afangaro ireo dia tapohina ilay rano ka rehefa mahazo bolabolana paty vao mijanona. Fonosina “film plastique” iny paty iny ary apetraka ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny ora roa.
2. Apetraka eo ambony taratasy fahandro ny dibera (sary 1). Fisahina ao anatin’io taratasy io izany ( sary 2) ary averina ampidirina ao anaty vata fampangatsiahana indray.
3. Asiana lafarinina ny latabatra hiasana dia avoaka ilay paty ( sary 3) ary fisahina ho efamira ( sary 4). Apetraka eo amboniny eo ilay dibera (sary 5) dia saromana ao anatin’ilay paty ao ( sary 6).
4. Velarina ilay paty ka ezahina ny hahazoany haavo ary tandremana tsy hiporitsaka tao ilay dibera ( sary 7). Fisahina dia avalona ary ampidirina ao anaty vata fampangatsiahana indray mandritra ny ora roa.
5. Tapitra io fe-potoana io dia havoaka indray ny paty ary atodika any aminao toy ny eo amin’ny sary. Averina fisahina toy ny teo aloha ary havalona indray rehefa avy eo ka ny avy aty amin’ny an-kavia no aforitra voalohany ( sary 8). Rehefa vita izay dia ampidirina ao anaty vata fampangatsiahana indray, mandritra ny ora roa. Izay no antsoina hoe : “tour”.
6. Raha te-hahazo paty manify sy mitombo tsara dia averina in-6 eo io “tour” io ka isaky ny vita izany dingana izany dia ampidirina ao anaty vata fampangatsiahana hatrany ilay paty.
7. Rehefa tapitra ny “tour” dia apetraka ny paty ary afaka ampiasaina amin’izay hitiavana azy izy rehefa avy eo.